मनाङबाट खाता खुल्ने, पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि ‘डन’ ?
HOME » मनाङबाट खाता खुल्ने, पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि ‘डन’ ?
काठमाडौं । आजको मतदान सकिएपछि आजै बेलुका देखि मतगणना सुरू गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ। पहिलो चरणमा चुनाव सम्पन्न भएका जिल्लाको मत गणनाका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ। त्यसैले आज पाँचबजेदेखि पहिलो चरण चुनावका मत गन्न थालिने छ।
आज भएको चुनावको मत गणना पनि रातिदेखि सुरू गर्ने बताइएको छ।
चुनावी मतपरिणामको व्यग्र प्रतिक्षा रहेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावको पहिलो नतिजा कुन जिल्लाबाट आउला र कुन उम्मेद्वार विजयी घोषित होलान् भन्ने अड्कल चल्न थालेको छ। अघिल्ला चुनावहरूमा कम मतदाता भएका जिल्लाबाट चुनावी नतिजा छिटो आउने गरेका हाम्रा आगाडि उदाहरण छन्।
मनाङ सबैभन्दा कम मतदाता भएको जिल्ला हो। त्यसैले यस अगाडिका चुनावहरूमा जस्तै मनाङको मत परिणाम तुलनात्मक अगाडि आउने छ। मनाङ यस्तो जिल्ला हो जहाँ प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि निर्विरोध विजयी घोषित गरिएका रेकर्ड छन्। ०५६ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसका पाल्तेन गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। मनाङमा पहिलो संविधान सभा चुनाव ०६४ मा बाहेक नेपाली कांग्रेसको एकछत्र जित हुँदै आएको छ।
मनाङमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारका रूपमा चर्चा पाएर पछि स्वतन्त्र उठेका ‘गुण्डा नाइके’ दिपक मनाङ्गे चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनको टक्कर नेपाली कांग्रेस उम्मेद्वारसँग हुनेछ।
मतगणनाको रौनक सुरू हुनुपूर्व एउटा चर्चा चलिरहेको छ-कतै ‘डन’ पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि घोषित हुने त हैनन्?
नयाँ संविधान पछिको पहिलो प्रतिनिधि-प्रदेश सभा चुनावमा विजयी घोषित हुने उम्मेद्वार उनै डन दिपक मनाङ्गे परे भने ?
मनाङको पहिलो नतिजा आउने अनुमान स्वाभाविक छ। तर यहाँबाट को निर्वाचित होला भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि कुर्नै पर्ने हुन्छ।
यस अगाडि उनका प्रतिस्पर्धीको नाम गलत उल्लेख भएकोमा सच्याइएको छ। -संपादक